Pdf.to Shuruudaha Adeegga
Adigoo galaya website-ka https://pdf.to , waxaad ku heshiinaysaa inaad ku xirto shuruudaha adeega, dhammaan sharciyada iyo xeerarka khuseeya, iyo inaad ku heshiisaan inaad adigu masuul ka tahay fulinta shuruucda maxaliga ah ee khuseeya. Haddii aadan ku raacsaneyn mid ka mid ah shuruudahaas, waxaa lagaa mamnuucay inaad isticmaasho ama aad gasho boggan. Maaddooyinka ku jira websaydaan waxaa ilaaliya xuquuqda daabacaadda iyo xuquuqda ganacsiga.
Ogolaashaha waxaa loo siiyaa si ku meel gaar ah halmar nuqulka qalabka (macluumaadka ama software) bogga Pdf.to ee boggaga shakhsiyeed, kuwa aan ganacsiga ahayn oo ku daawanaya kaliya. Kani waa deeqda liisan, ee aan lagu wareejin cinwaanka, iyo liisankan liisankan:
Isku day inaad dib-u-habeyn ama dib-u-rogto injineer kasta oo software ah oo ku yaal bogga Pdf.to;
Ka saar wixii xuquuq ah ama qoraallo kale oo macaamiishiisa ah; ama
u wareejinta alaabta qof kale ama 'muraayadaha' qalabka ku jira server kasta oo kale.
Sharcigan ayaa si otomaatig ah u joojin doona haddii aad ku xad gudubto mid ka mid ah xayiraadahaan waxaana laga yaabaa inay joojiso Pdf.to wakhti kasta. Markaad joojinayso aragtidaada qalabkaan ama marka la joojiyo liiskan, waa inaad baabi'isaa walxaha lagaa soo dajiyay ee aad haysato haddii ay tahay qaab elektaroonig ah ama daabacan.
Macluumaadka bogga Pdf.to waxaa lagu bixiyaa 'as' '. Pdf.to ma bixiso wax damaanad ah, oo muujinaya ama la qeexay, iyada oo la raacayo ama ka dhigaysa dhammaan damaanada kale oo ay ka mid yihiin, aan xadidnayn, damaanad qaadyada shuruudaha ah ama shuruudaha ganacsiga, u qalmida ujeedo gaar ah, ama aan xadgudub ku ahayn hantida fikradaha ama xadgudubyada kale ee xuquuqda.
Dheeraad ah, Pdf.to ma sheegayo ama ha ka dhigi wax matalaad ah oo ku saabsan saxnaanta, natiijooyinka suurtogalka ah, ama kalsoonida isticmaalka qalabka ku jira boggiisa ama haddii kale la xidhiidha qalabkaas ama goobaha kuxiran boggaan.
Mana aha wax dhacaya Pdf.to ama alaab-qeybiyeyaashu waxay mas'uul ka yihiin wixii khasaare ah (oo ay ku jiraan, aan xadidnayn, magdhow ku dhicin xogta ama faa'iidada, ama sababo ganacsi joojin) sababtoo ah isticmaalka ama awood la'aanta isticmaalka qalabka Pdf.to website-ka, xitaa haddii Pdf.to ama Pdf.to wakiilka idman loo soo wargaliyay hadal ama qoraal ahaan suurtagalnimada dhaawaca noocan ah. Sababtoo ah qaar ka mid ah xudduudaha qaarkood ma ogola xaddidaadyo ku xiran damaanada la sheegay, ama xaddidaadaha mas'uulka ah ee waxyeelada soo gaartay ama waxyeellada gaartay, caqabadahaas laguma dabakhayo.
5. Xaqiijinta maaddooyinka
Waxyaabaha ku qoran muuqaalka bogga Pdf.to waxaa ku jiri kara farsamo, faafaahin, ama khaladaad sawir leh. Pdf.to ma ogola in mid ka mid ah qalabka website-ka uu yahay mid sax ah, dhammeystiran ama hadda jira. Pdf.to ayaa isbeddel ku sameyn kara waxyaabaha ku jira websaydheeda wakhti kasta iyadoon ogaysiis la siin. Hase yeeshee, Pdf.to ma sameeyo wax ballan ah oo lagu cusbooneysiinayo qalabka.
Pdf.to ayaan dib u eegin dhammaan boggaga ku xiran boggeeda internetka mana ka masuul ah waxyaabaha ku jira boggaan oo kale. Isku-dubarididda xiriir kasta ma aha mid muujinaysa Pdf.to goobta. Isticmaalka boggaga internetka ee la midka ah waxay ku jiraan khatarta qofka isticmaala.
Pdf.to waxay dib u eegi kartaa shuruudaha adeegga boggooda internetka mar kasta oo aan ogaysiis lahayn. Adigoo isticmaalaya boggan waxaad ku heshiineysaa in lagu xiro qaybta hadda ee adeegyadan.
Shuruudahaas iyo shuruudahaan waxaa lagu maamulaa oo loo eegaa sida waafaqsan shuruucda Connecticut oo aad si aan macquul ahayn u gudbin karto awoodda gaarka ah ee maxkamadaha ee Gobolkaas ama goobta.
Kaqeybgalayaasha adeegyada PDF.to waxay soo dejinayaan, beddelayaan, marin u helayaan una adeegsanayaan agabyo iyo adeegyo iyagoo halistooda wata. PDF.to ma dabagasho waxyaabaha macaamiisha ka kooban. PDF.to mas'uul kama noqon doonto wixii waxyeelo ah ee la sheegto iyada oo ay sabab u tahay adeegyada, macluumaadka, ama alaabada PDF.to. Kaqeybgale kastaa wuxuu mas'uul ka yahay dhamaan agabyada ku keydsan PDF.to, saxsanaanta agabyada ay kujiraan damaanadaha, iyo helitaanka dhamaan rukhsadaha lagama maarmaanka u ah iskuxiraha iyo qalabka suuqgeynta. PDF.to ma sameyso wax damaanad ah oo qeexan ama qeexan oo la xiriira saxnaanta, tayada, ama dabeecadda macluumaadka laga yaabo inay ka helaan adeegsadayaasha ama kaqeybgalayaasha internetka iyagoo adeegsanaya adeegyada PDF.to.
Fadlan sidoo kale xusuusnow dhammaan adeegsadaha soo dejinta iyo waxyaabaha ku jira ayaa la tirtiray saacado gudahood markii la soo dejinayo, oo jaangooyooyinkooda la beddelay ayaa la tirtiray afar iyo labaatan saac gudahood sidoo kale, macno ahaan keliya kaydinta ku meelgaarka ah
Haddii aad aamminsan tahay in wax kasta oo ku jira PDF. ay ku xadgudbayaan xuquuqda daabacaadda ee aad adigu leedahay ama aad maamusho, waxaad u diri kartaa ogeysiis qoran oo ah Xad-gudubka Xuquuqda-Xuquuqda Dareenka ("Ogeysiis") ee loo qoondeeyay Sharciga Xuquuqda Milyaniyamka ee Millennium ("DMCA") . Ogeysiiska, waa inaad:
(A) Inuu si faahfaahsan u caddeeyo shaqada xuquuqda daabacaadda ama hantida aqooneed ee aad sheegatay in lagu xad gudbay si aan u helno maaddada;
(B) Aqoonsiga URL ama goob kale oo gaar ah oo ku taal PDF.to oo ay ku jiraan maaddada aad sheeganayso inay ku xadgudbeyso xuquuqdaada;
(C) Bixinta saxiixa elektaroonigga ama muuqaalka ee milkiilaha xuquuqda lahaanshaha ama qof loo idmay inuu ku shaqeeyo magaca milkiilaha;
(D) Ku dar bayaan aad ku kalsoon tahay in caqiidadaadu wanaagsan tahay in isticmaalka la isku haysto uusan fasax ka helin milkiilaha xuquuqda daabacaada, wakiilkiisa, ama sharciga;
(E) Ku dar bayaan sheegaya in macluumaadka ku jira ogeysiiskaagu uu yahay mid sax ah oo lagu caddeeyay ciqaabta been abuurka inaad adigu tahay mulkiilaha xuquuqda daabacaadda ama laguu oggolaaday inaad ku shaqeyso magaca mulkiilaha xuquuqda lahaanshaha; iyo,
(F) Ku dar magacaaga, cinwaanka boostada, lambarka taleefanka iyo cinwaanka emaylka.
Waxaad u diri kartaa Ogeysiiskaaga Wakiilka loo qoondeeyay DMCA emayl, fakis, ama boosto sida hoos ku xusan:
411 S. Wadada Sangamon
Faks ugu dir: 312-803-1667
Markii PDF.to ay hesho ogeysiis sax ah, waxay si dhakhso leh uga saareysaa ama u joojineysaa marin u helista waxyaabaha xadgudubka lagu eedeynayo waxayna joojineysaa xisaabaadka la xiriira (haddii ay khuseyso) si waafaqsan DMCA.
PDF.to waxay qaadatay siyaasad lagu joojinayo, duruufaha ku habboon iyo kali kali ahaanteeda, xubnaha loo arko inay ku celcelinayaan ku xad gudubka. PDF.to sidoo kale waxay ku xadidan tahay ikhtiyaarkeeda helitaanka PDF.to iyo / ama joojiso isticmaalkeeda qofkasta oo ku xad gudbaya xuquuqda lahaanshaha aqooneed ee dadka kale, haddii ay jirto iyo haddii kaleba ku xad gudubka.
PDF illaa ICO
PDF ilaa BMP
PDF ilaa SVG
PDF ilaa WebP
PDF ilaa GIF
PDF ilaa PSD
ICO ilaa PDF
BMP ilaa PDF
SVG ilaa PDF
WebP ilaa PDF
PSD ilaa PDF
253,649 isbeddelada tan iyo 2019!
Nala soo xiriir - Nagu saabsan - API - Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah - Shuruudaha Adeegga - Twitter
Waxaa sameeyey nadermx - © 2021 PDF.to
Waxaad dhaaftay xadka beddelka ee seddex saacadiiba, waad u rogi kartaa faylashaada gudaha 59:00 ama saxiixdo oo badalo waxbadan hada.
Ka baaraandegidda dufcaddu waxaa keliya oo loo isticmaali karaa dadka isticmaala Pro. Casriye hada si aad u socodsiiso feylasha badan hal mar.
Hel marin aan xad lahayn ama iskuday hal feyl